မွနျမာ့ဂဇကျ အယျဒီတာ့ သငျပုနျး -ဇှနျ ၂၀၂၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » မွနျမာ့ဂဇကျ အယျဒီတာ့ သငျပုနျး -ဇှနျ ၂၀၂၀
မွနျမာ့ဂဇကျ အယျဒီတာ့ သငျပုနျး -ဇှနျ ၂၀၂၀
Posted by kai on Jun 13, 2020 in Editor's Notes, Myanmar Gazette, Politics, Issues |0comments
သာမနျမကြျစိနှငျ့ မမွငျ ထိကိုငျမရ လူသားအားပူးကပျဒုက်ခပေးတတျ ကိုယျခံအားမကောငျးသူတို့အား သစေသေညျအထိ ဒုက်ခပေးတတျသဖွငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအား ပွိတ်တာကောငျ အဖွဈဤသူတငျစားခဲ့သညျ။ မွနျမာ့ဘာသာရေးထုံးတမျးအရ ဝမောနိကပွိတ်တာသညျ နတျမြိုးနှယျတှငျးထညျ့သှငျးနိုငျသညျ။ စတုမဟာရာဇျ,နတျတို့ဘုံတှငျ အောကျဆုံးဘုံသားတညျး။
မွနျမာဓလေ့တှငျ ပုဂံခတျေ ပထမမွနျမာနိုငျငံတောျတညျထောငျသညျ့အနောျရထာမငျးလကျထကျမှ အစိမျးသနေတျမြားပေါျထှကျလာခဲ့ကွသညျ။ အခြို့သောသမိုငျးလေ့လာသူမြားအဆိုအရ နတျစိမျးမြားမှာ မငျးအနောျရထာ၏ နိုငျငံရေးကစားမှုဟုဆိုကွပါ၏။ ဆိုလိုသညျမှာ မိမိ၏ဘုရငျ့အာဏာကိုထိခိုကျနိုငျသညျ့ ဆိုငျရာဒသေတှငျ လူခစြျလူခငျမြားသညျ့ သူပုနျထခေါငျးဆောငျပိုငျးကို ဖွုတျထုတျသတျပွီးနောကျ လူထုကို ဖွသေိမျ့သညျ့အနဖွေငျ့ လောကမှထှကျသှားခွငျးမဟုတျ.. အယူတိမျး၍နတျစိမျးဖွဈသှားပါသညျမူ၍ ဆိုငျရာအထောကျအပံ့ပေး ( နတျကှနျးသတျမှဝာျ) ကိုးကှယျရာပုဂ်ဂိုလျအဖွဈသဘောထားခိုငျးသညျမြိုးပါ။ မွနျမာရိုးရာလာ အတှငျး/အပွငျ ၃ရမငျးအမြားစုသညျထိုမှနောကျခတျေထှကျခညြျးသာတညျး။
အယူတိမျးလြှငျနတျစိမျးဖွဈသညျဟူသညျ မငျးအနောျရထာလကျထှကျ နိုငျငံရေးကစား/ဖနျတီးခကြျဆိုအံ့။ ထိုအယူအဆမြိုးသညျ ထိုငျးနိုငျငံ၌လညျး သကျရောကျရှိပုံရသညျ၊ မွနျမာမငျးမြား ထိုငျးနိုငျငံကိုဝငျရောကျသိမျးပိုကျခဲ့ဖူးရာ၌ ထိုငျးနိုငျငံသားအခြို့တို့ ဘုရငျ့နောငျ၊ အလောငျးဘုရားအပါအဝငျ သူတို့၏ ရှေးဘုရငျမြားအား နတျမြားအဖွဈကိုးကှယျကွသညျ။
အနောကျတိုငျး၏ ဂရိနတျဘုရားမြားလညျး ထိုနညျးဆနျဆနျမြားမှ လာသညျဟုပငျဆိုရနိုငျသညျ။ သာမနျထကျစှမျးသောသူမြားသလှေနျလငြျ နတျ, တနညျးအားဖွငျ့ နတျဘုရားမြားဖွဈသှားသညျဆိုပါစို့။
ကိုကွီးဂြော့ – ဂြော့ဖလှိုကျနတျစိမျး
မလေ၂၅ရကျနေ့၌ မငျနီယာပုလိဈမွို့ထဲလမျးမပေါျတှငျ အာဖကနျ-အမရေိကနျတဦးဖွဈသူ ဂြော့ဖလှိုကျသညျ လညျပငျးဒူးနှငျ့ ၈မိနဈ ၄၆စက်ကနျ့ ဖိနငျးခံရရငျး လူဖွူရဲတဦး၏အသတျခံရလသေညျ။ လူမညျးအမြိုးသမီးတဦးမှထိုဖွဈပကြျမှုအစအဆုံး နောကျဆုံးထှကျသကျအထိ ဆဲလျဖုံးဖွငျ့ ဗီဒီယိုရိုကျမှတျတမျးတငျလိုကျကာ ကမ်ဘာသို့ ဆိုရှယျမီဒီယာမှတဆငျ့ထုတျလှငျ့ပဈခဲ့သညျ။
နေ့ခငြျးပငျ ( ၂၀၁၃၏တခုသောနှရောသီမှ အစပွုထားသညျ့ လူမညျးအသကျတာလညျး အရေးကွီးလှပါသညျဟူသော) “လူမညျးအသကျတာ” #BlackLivesMatter ခှငျ့တူညီမြှလှုပျရှားမှုဖွငျ့ အမရေိကနိုငျငံတဝှမျး အုံကွှပါလသေညျ။ အဆငျ့ဆကျ၍ ကမ်ဘာအခွားနိုငျငံကွီးမြားသို့ပါ ပွနျ့နှံ့သှားရာ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျသညျထကျပငျမွနျသညျဆိုရမညျ။
ဂြော့ဖလှိုကျအမညျတိုငျတညျ၍ ခှငျ့တူညီမြှလှုပျရှားမှုသညျ လှနျစှာထိရောကျလှပါသညျ။ စကွဝတေးမငျးတမြှ အာဏာကွီးလှပါသညျဆိုသော အမရေိကသမ်မတပငျ အိမျဖွူတောျ မွေ‌အောကျဘနျကာအောကျ ခတေ်တရှောငျရသညျဟူသတတျ။ လူမြိုးရေးခှဲခွားသညျ “ငခှဲကောငျ”တဦးမှ အယူတိမျးသတျဖွတျ၍ အစိမျးသရေသူ တိုငျတညျခံ‌ဂြော့ဖလှိုကျသညျ ကမ်ဘာရိုးရာအားဖွငျ့ ဂြော့ဖလှိုကျနတျစိမျး, ကိုကွီးဂြော့ပငျဖွဈတော့သညျ။
သာမနျအားဖွငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈသညျ လူလူခငြျးထံမှ/သို့ပူးကပျကူးစကျလှယျသညျ။ လထေဲရှိ တံတှေးမှုနျစမှတဆငျ့ လူတဖကျသား၏အသကျရှုလမျးကွောငျးထဲရောကျရှိကာ ၂ရကျမှ ၁၄ရကျအတှငျးတှငျအစှမျးပွတတျ၍ ဖြားနာတတျသညျ။ အသကျဝိဉာဥျနှုတျယူတတျပါလသေညျ။
သို့ဆိုသောျ ဂြော့ဖလှိုကျမတရားအသတျခံရမှုနှငျ့တှဲ၍ အမရေိကား၏ လူဦးရထေူထပျရာမွို့ကွီးတိုငျးရှိဆန်ဒပွပှဲမြားဟူသညျ အတူပူးကပျလှုပျရှားနသေော အသကျရူပွငျးသညျ့ လုအုပျစုကွီးမြားဖွဈ၏။
ယခုစာရေးခြိနျတှငျ ၁၈ရကျတိုငျခဲ့ပွီ။ မညျသညျ့ထူးခွားခကြျကွီးမှမရှိသေး။
ပွညျနယျ (၂၀)ခုတှငျ ကူးစကျနှုနျးတိုးတကျလာမှုတှေ့ရသညျဆိုပါသညျ။ ကူးစကျနှုနျးနှငျ့အတူ သနှေုနျးလညျးခုနျတကျရမညျဖွဈရငွား မူလစတငျကူးစကျလာရာ မတျလဆနျး၏ စံခြိနျတဝကျပငျမမှီ။ အထူးသဖွငျ့ လူလုံးထှေးအုပျစုကွီးလှသညျ နယူးယောကျ။ ဝါရှငျတနျဒီစီနှငျ့ မငျနီယာပုလိဈမွို့တို့တှငျ သနှေုနျးအကပြိုငျးရှိဆဲပါ။ အခြိနျမလုံလောကျသေးသလော?
နတျတို့သညျ တနျခိုးအစှမျးအလိုကျ နရောယူရသညျ/ဖယျပေးရတတျသညျကို ဖတျရဖူးပါသညျ။ ယခု ကိုကွီးဂြော့နတျသညျ ကိုရိုနာပွိတ်တာထကျစှမျးသဖွငျ့ ပွိတ်တာခတေ်တနောကျဆုတျရှောငျပေးထားသညျလော?
မညျသို့ဖွဈစေ ကမ်ဘာအနှံ့ ယနေ့ ဇှနျ၁၂အထိ လူပေါငျး ၄၂၅,၀၀ဝအသကျခြှပွေီးသော ကိုရိုနာပွိတ်တာ ပွနျလာပါလေဦးမညျ။
၁၆၁၉ သွဂုတျလ ၂ဝရကျနေ့မှစ, အာဖရိကတိုကျမှတဆငျ့ အမရေိကသို့ ကြှနျအဖွဈတငျသှငျးကာ လူမညျးတို့လုပျအားအမွတျထုတျခိုငျးစားခဲ့ကွသညျ။
၁၈၆၁ တှငျ အဆိုပါလူမညျးကြှနျစနဈတို့အကွောငျးရငျးအားဖွငျ့ အမရေိကပွညျတှငျးစဈဖွဈရာ ဖကျဒရယျပွညျ‌ထောငျစု-မွောကျပိုငျးတပျနှငျ့ ကှနျဖယျဒရိတျ-တောငျပိုငျးတပျ၏ တပျသား အမရေိကနျ ၆၂၀,၀၀ဝ ကြောျသဆေုံးခဲ့ကွပွီး လူမညျးတို့ ကြှနျဘဝမှာလှတျမွောကျခွငျးနှငျ့အတူ ဆုံးခနျးတိုငျခဲ့သညျ။ နောကျပိုငျး သမ်မတလငျကှနျးပါ လုပျကွံခံရပါသညျ။
လူမညျး ခှငျ့တူညီမြှလှုပျရှားမှုမြားတှငျ လကျနကျကိုငျတောျလှနျသူမြားဖွဈသညျ့ Malcolm X (1925-1965) နှငျ့ Black Panther Party (BPP)(1966-1982) ကဆြုံးကာ ခရဈရှနျတရားဟောဆရာ မာတငျလူသာကငျး၏ လူ့အခှငျ့အရေးတနျးတူညီမြှလှုပျရှားမှုမြားအောငျမွငျသညျကိုတှေ့ကွရမညျ။
၂၀၀၈တှငျ ကငျညနျလူမြိုးအာဖရိကနျနှငျ့အမရေိကနျလူဖွူအမြိုးသမီးတို့၏သား အိုဘားမား အမရေိကသမ်မတဖွဈခဲ့သညျ။
ယခု လူမြိုးခှဲခွားနှိမျခမြှုအကွောငျးပွု မညျသို့ဖွဈပကြျနသေညျကို သုံးသပျကွညျ့ကွပါစို့။
သာမနျအားဖွငျ့ လူအုပျစုကွားတှငျ သှေးအေးစှာသတျဖွတျသညျ့နသေူကို လူအုပျစုကွီးမှဒေါသအလြှောကျ ခကြျခငြျးတုံ့ပွနျကွမညျသာ။ ယခုမှု အောျဟဈနကွေယငျးမှ အစအဆုံးစနဈတကမြှတျတမျးတငျ ကမ်ဘာကို အသိပေးနိုငျသညျ့ အတှေးအခေါျ ရခြေိနျအဆငျ့ရှိသညျ။ မညျသညျက ပိုမိုထိရောကျသညျကို လူမညျးတို့ကောငျးစှာသိနသေညျ။
သို့ဖွငျ့ အဆိုပါလူဖွူရဲမှာ လူသတျမှု (မူလ ဒီဂရီ ၃မှ ၂အထိ) ကနြျ၃ဦးမှာလညျး လူသတျမှုဖွငျ့ ‌ဒေါျလာ750k အာမခံကွေးအထိတိုးကာ အခြုပျကရြသညျ။ တကျလာသောတောငျးဆိုမှုမြားနှငျ့အတူ ကှနျဂရကျမှ ရဲတပျဖှဲ့မြားအား ပွနျလညျပွငျဖှဲ့ရနျပငျ ကှနျဂရကျမှဥပ‌ဒကွေမျးပွုရနျ ပွငျဆငျနရေပါသညျ။
မပွီးသေး အခြို့မွိုကွီးမြားတှငျ ရဲ၏ရံပုံငှဘေကျဂကြျဖွတျရနျ အဆိုတငျသှငျး သကျ‌ရောကျဆောငျရှကျလာကွသညျ။ ထိုမြှလညျးမပွီးသေးပါ။ ရဲတပျဖှဲ့ကို အပွီးတိုငျဖကြျသိမျးရနျအထိပငျ တကျလှမျးတောငျးဆိုနကွေပပွေီ။
လူမညျးအသကျတာ BLM ခှငျ့တူညီမြှမူလကွှေးကြောျတောငျးဆိုခကြျမှ နိုငျငံရေးအရအဆငျ့ဆငျ့ဖိအားပေးသှားမှု တကယျ့ဖွဈရပျမြားရယျပါ။
လောလောလတျလတျ လတေပျခြုပျရာထူးကို လူမညျးဗိုလျခြုပျကွီးခြာလီဘရောငျးရလိုကျပွနျပပွေီ။
ဒီမိုကရကျတဈပါတီသမ်မတလောငျးဂြိုးဘိုငျဒငျ၏ ဒုသမ်မတအဖွဈလညျး လူမညျးအမြိုးသမီးကိုပေးရနျဖိအားမြားပေးမြားနပေါသညျ။
ကိုကွီးဂြော့နတျကိုသုံး လူမညျးမြား ကောငျးစှာလုပျသှားပုံမှာ ဒေါကျတာမာတငျလူသာကငျးထကျ အောငျမွငျသညျဆိုရမညျ။ ခှငျ့တူညီမြှအုံကွှတောငျးဆိုမှုတို့တှငျ မီလနျနီယယျမြိုးဆကျ(1981 – 1996)လုဖွူမြားအငျအားကွီးစှာပါဝငျလာသညျမဟုတျပါလား။ လူမညျးတို့သညျ ပွီးခဲ့သောနှဈ၄၀ဝတှငျ လူမညျးတို့သညျ လူဖွူနှငျ့အတူတကှ ရုနျးကနျရငျး နိုငျငံရေးအရ အတိုငျးအတာတခုကို ကောငျးစှာလှမျးယူထားနိုငျခဲ့ပွီ။
အရေးကွီးအစိုးရအလုပျ ဘဝနောငျရေးအာမခံကောငျးသညျ့နရောမြားတှငျ သူတို့ရှိသညျ။ အစိုးရပေးအခှငျ့အရေးမြားကို ကောငျးစှာယူတတျ သုံးတတျသညျ။
ခမြျးသာသော အမွငျ့အသိုငျးအဝိုငျးနှငျ့ ဖြောျဖွရေေးဆယျလီအသိုငျးအဝိုငျးတှငျလညျး လူမညျးပါမှပှဲစညျသညျ။ အမရေိကနျကွိုကျအားကစားလောကတှငျလညျး ထိပျပိုငျးတိုငျး သူတို့ခညြျးသာ။
အမရေိကားသညျ ၁၉၁၈ စပငျနျးနဈဖလူ ရောဂန်တရကပျ+ ၁၉၂၉ စီးပှားပကြျကပျ+၁၉၆၈ ခှငျ့တူညီမြှလှုပျရှားမှု တပွိုငျတညျးရငျဆိုငျနရေသညျ့အခွဖွေဈပါ၏။
ထို့ကွောငျ့ဂြော့ဖလှိုကျလှုပျရှားမှုတှငျ ဒုတိယ သတငျးစကားပါသညျ။ သမ်မတထရမျ့၏ အုပျခြုပျရေးကို လကျဝဲဖကျမှတိုကျရိုကျအရေးဆိုရငျး လာမညျ့နိုဝငျဘာလ ၃ရကျအထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ ရညျရှယျသညျမွငျ၏။ ရှေးကောကျပှဲကငြျးပရာနှဈတိုငျး၏ ၄လနောကျပိုငျးသညျ ပါတီကွီး၂ပါး၏ သမ်မတနှငျ့သမ်မတလောငျးတို့အကွီးအကယြျမဲဆှယျနရေမညျ့ ကာလဖွဈ၍ပါ။ ၁ဝလပိုငျးကုနျအထိ မဲဆှယျအလုပျတိုငျး တာသှားပါ၏။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ ယခုကဲ့သို့ကာလတှငျ တိုငျးပွညျရေးရာမြားကို ဖွရှေငျး ဒီဘိတျလုပျကွရငျး မဲဆှယျပှဲမြားအဖွဈ သမ်မတလောငျးမြားအခငြျးခငြျးတှနျးတိုကျနရေမညျ။
ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ လူထှကျလကျတှေ့မလုပျပွနိုငျရကား silent majority တိတျဆိတျစောငျ့ကွညျ့မဲဆန်ဒရှငျမြားသို့ လကျဝဲ-လကျယာ နိုငျငံရေးသမားမြားက သူတို့သတငျးစကားမြား အရောကျပို့နကွေသညျဆိုပါစို့။
လကျရှိအာဏာရ လကျယာအစိုးရ ထရမျ့အုပျခြုပျရေးမှလညျး အဆငျ့ဆငျ့တုံ့ပွနျနပေါသညျ။ ကိုရိုနာပွိတ်တာကပျဘေးတှငျ မကြျနှာမရသော သမ်မတသညျ ယခု ကိုကွီးဂြော့အရေးတှငျလညျး အခွအေနမေလှ။ ရီပါ့ဗလဈကနျမြားလညျး ယခငျ၂၀၁၆ကဲ့သို့ပငျ သူဖကျတှငျမရှိ။
သမ်မတထရမျ့၏ ခိုငျမာရပျတညျရာနယျမွေ တိုငျးပွညျစီးပှားရေးသညျ ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ အကဖြကျကိုညှနျးနသေညျ။
မီဒီယာကွီးမြား အားလုံးလိုလိုနှငျ့လညျးအဆငျမပွရေကား လကျတှေ့ဖွဈနသေညျ့အခွအေနတေို့ကို လူထုမှ ဘကျလိုကျခွငျးကငျးစှာ သိနိုငျရနျအခှငျ့လညျးမရှိ။
ခြိုငျးနားနှငျ့ ကုနျသှယျစီးပှားစဈပှဲတှငျးဖွဈငွား စဈအငျအားကွီးရုရှားနှငျ့ကား အိုကေ၊ ဥရောပနှငျ့ အခွအေတငျသညျဆိုရမညျ။
လှနျခဲ့သော ၄နှဈကလညျး ယခုကဲ့သို့ပငျ ဒေါျနယျထရမျ့ဖကျတှငျ မဲမြားမရှိခဲ့။ ဟီလာရီကလငျတနျနှငျ့ယှဥျလြှငျ ဆိုငျရာစဈတမျးတိုငျးလိုလိုတှငျရှုံးခဲ့သညျခညြျးသာ။
မညျသို့မညျပုံလုပျလိုကျသညျမသိ။ အနိုငျရသှားခဲ့ဖူးသညျ။ သမ်မတထရမျ့၏ တကယျ့အရညျအခငြျးကို ၂၀၁၆ကဲ့သို့ ထပျ၍မွငျကွရဦးမညျလော?
မညျသညျ့သမ်မတတကျသညျဖွဈစေ ခိုငျမာသညျ့ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ဓနအငျအားသညျ အမရေိကားကို ရောဂန်တရကပျနှငျ့ ဒုဗ်ဘိက်ခန်တရကပျတို့မှ ဆှဲထုတျသှားနိုငျပါသညျ။
အာရှတိုကျသားအမြားစုမှာ ၁၉ရာစုအစောပိုငျးက အမရေိကား၏ ရထားလမျးမြားဖောကျလုပျရနျ၊ကွံစိုကျရနျ အလုပျလုပျရညျရှယျခကြျဖွငျ့ သိနျးခြီရောကျလာခဲ့ပွီး တိုငျးပွညျကိုအလုပျအကွှေးပွုခဲ့ကွသညျ။သို့ငွား လူဝါ-အရှေနျးမြားအား အမရေိကနိုငျငံသားမပေး‌ရေး ဥပဒမြေားပငျပွုခဲ့ဖူးသလို ပုလဲဆိပျကမျးဗုံးကွဲခံရမှုအကွောငျးပွု၍ ဂပြနျဇာတိနှယျမြားကို ဖမျးဆီးကာ သီးသနျ့စခနျးမြားသို့ပို့ဆောငျပွီး ခွံခတျထိနျးသိမျးခဲ့ဖူးပါသညျ။
လူနညျးစု အာဖရိကနျ-အမရေိကနျမြား၏ ခှငျ့တူညိမြှလှုပျရှားမှု ရလဒျမြားကွောငျ့ အရှေနျး-အမရေိကနျမြားလညျး မွို့တောျဝနျ ကှနျဂရကျအမတျ ဆိနိတျတာမြားအထိ တကျလှမျးနိငျပါပွီ။ လူနညျးစုအခငြျးခငြျး လူမညျး/လူညိုမြားနှငျ့ကား အခှငျ့အရေး ရယူနိုငျမှုလှနျစှာကှာခွားပါသေးသညျ။
ယခုခတျေတှငျမူ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ၏ မူလနိုငျငံသညျ ခြိုငျးနားဖွဈ၍ သမ်မတထရမျ့၏ ကစားကှကျမြားကွားမညပျမိအောငျနကွေရမညျ။ လူမညျးမြားကလညျးကောငျး လူညို(စပနျးနဈ/လကျတီနို) မြားကလညျးကောငျး ကွိမျးမောငျးရနျလုပျခွငျးပငျရှိကွသညျ။
ကှနျဂရကျအမတျ ခြိုငျးနီဈးဇာတိနှယျ ဂြူဒီခြုး၏စာအရ Chinese Virus ဟုသမ်မတထရမျ့တှိဆိုပွီးနောကျပိုငျးရကျမြားတှငျ အရှေနျး-အမရေိကနျတို့ ခှဲခွားနှိမျခဆြကျဆံခံရမှုနေ့စဥျပငျရာဂဏနျးမြှရှိသှားခဲ့သညျ။ ထပျဆငျ့၍ ကုနျသှယျစီးပှားစဈလညျး ဆငျနှဲဆဲဖွဈ၍ နောငျလ-နှဈမြားတှငျလညျး သတိထားနထေိုငျကွရမညျ့ အခွအေနဖွေဈ၏။
မိမိတို့မွနျမာ-အမရေိကနျမြားလညျး အမရေိကား၌သနျးခြီအခွခေရြောကျနပေါပွီ။ အရှေနျးမြားကွား သိသာစှာရှိသော ဦးရပေမာဏဖွဈ၏။ လာလတံ့သော မြိုးဆကျမြားအရေးအတှကျ ပွငျဆငျပေးရလိမျ့မညျ။
မွနျမာတို့ ပညာရေးအားပေး၍ ဒုတိယမြိုးဆကျ၌ နှဈစဥျထောငျခြီဘှဲ့ရ တက်ကသိုလျဝငျကွသညျကို သတိထားမိပါ၏။ စီးပှားရေးဦးစားပေး စုစညျးသငျးဖှဲ့ အလုပျလုပျကွပါ။ မြိုးဆကျသဈကို လကျလှဲနရောပေးပါ။
မီဒီယာ တီဗီနှငျ့ သတငျးစာ ကှနျမွူနတီအဖှဲ့အစညျးအဆောကျအဦ ပုံမှနျပှဲတောျမြား ဘာသာရေးအဖှဲ့အစညျးမြား လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးမြား လိုပါသညျ။
ဆိုငျရာဘာသာရပျအလိုကျ ကြှမျးကငြျသူ မွနျမာဇာတိနှယျမြားအား အသိအမှတျပွုဖိတျကွား ဆှေးနှေးမှုမြားလိုပါသညျ။
ယခုကဲ့သို့ ကိုဗဈကာလတှငျ လိုအပျသော အစိုးရဆီမှငှကွေေးထောကျပံ့မှုမြား အခှငျ့အရေးမြားကို မညျသို့ရယူမညျ မညျသို့ရုနျးကနျမညျတို့ကို ဆှေးနှေးညှနျကွားခွငျးမြားလိုပါသညျ။
သိသူတို့ ဆကျသှယျကွစေ၊ လုပျ(ပေး)ကွစလေို။